पाल्पा । १९, जेठ । ०७८
देशमा अहिले कोरोनाले महामारीको रुप लिएको छ । पाल्पा जिल्लाका स्थानीयतहरुले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र व्यवस्थापनको लागि गरिरहेका काम तथा पहलहरुलाई हामीले अन्तर्वार्ताको माध्यमबाट प्रस्तुत गरिरहेका छौं । यसैविच पाल्पाको माथागढी गाउपालिकाले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा गरेका पहलहरुलाई माथागढी गाउपालिकाका अध्यक्ष शन्तोष थापा मगर संग पाल्पापाटीका सम्पादक विष्णु घिमिरेले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित एक अन्र्तवार्ता प्रस्तुत गरेका छौं ।
धन्यवाद, माथागढी गाउपालिकाले जव कोरोना संक्रमणको दोश्रो लहर सुरुभयो, लगत्तै हामीले अस्पताल बनाउनु पर्छ भन्ने भयो सोहि अनुरुप कोरोना अस्पताल संचालन गरयौं, अक्सिजनको जोहो गर्न अत्यान्त कठिन थियो, अक्सिजन अभाव हुन नदिन काम गरयौ, जो संक्रमितहरु घरमै होम आइसोलेसनमा बस्नुभएको छ । उहाँहरुको रेखदेख र उपचार, संक्रमितलाई अस्पताल पुरयाउन एम्बुलेन्सको व्यवस्थापन, ज्यान गुमाएकाहरुको शव व्यवस्थापन लगायतका कामहरु गरिरहेका छौं ।
कोरोना अस्पताल कसरी संचालन गर्नुभएको छ ? अस्पतालको सेवा कस्तो छ ?
कोरोनाको दोश्रो लहर फैलिएसंगै अस्पतालहरुमा बेडको अभाव हुन थाल्यो, मानिसहरु अक्सिजन नपाएरै ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आयो, लगत्तै हामीले हाम्रा नागरिकहरुलाई कोरोना अस्पताल संचालनमा ल्यायौं । माथागढी गाउपालिकाको देउगिरमा १५ वेडको अस्पताल संचालन गरेका छौं । त्यहा २० वटा सानाठूला गरी अक्सिजन सिलिण्डर, ७ वटा अक्सिजन कन्सनट्रेटर व्यवस्था गरेका छौं । मेडिकल अधिकृत पाउन सकेनौं यद्यपी मेडिकल अधिकृतको सल्लाह र सहयोगमा २ जना अहेव, २ जना स्टाफ नर्श र कार्यालय सहयोगीको व्यवस्था गरेका छौं । अहिलेसम्म १६ जना वढीले सेवा लिनुभएको छ । औषधी र अक्सिजनको अभावमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आएको छैन । हामीले कोरोना अस्पतालमा बस्ने विरामीहरुको लागि खानाको पनि निशुल्क व्यवस्थापन गरेका छौं ।
माथागढी गाउपालिकाद्धारा संचालित कोरोना अस्पताल
अहिले कोरोना संक्रमितहरुको लागि एम्बुलेन्स र सवारीसाधनको उपलब्धता निकै महत्वपूर्ण देखियो । हामीले माथागढीमा ३ वटा एम्बुलेन्स र एउटा गाउपालिकाको आफ्नै गाडीलाई कोरोना संक्रमित बोक्नको लागि व्यवस्था गरेका छौं । अहिलेसम्म माथागढीमा एम्बुलेन्स नपाएर अस्पताल जान नपाएको स्थिती छैन् ।
एम्बुलेन्सकै कुरा गर्दा, माथागढीमा निशुल्क एम्बुलेन्स भनेर चर्को शुल्क लिएको भन्ने आएको छ नी ?
धन्यवाद, मलाई पनि यो विषयले अचम्म बनाएको छ । हामीले एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेका छौं । तर निशुल्क व्यवस्था गरेका छैनौं, त्यो शशुल्क नै हो, यद्यपी माथागढीका गरिव घरपरिवारको लागि भने निशुल्क नै हो । सक्नेले पैसा तिर्ने नसक्नेलाई निशुल्क हो । पैसा नभएकै कारण अस्पताल जानबाट कोहीपनि वन्चित वनाएका छैनौं । घरको अवस्था कमजोर छ, एम्बुलेन्सलाई तिर्ने पैसा छैन भने सम्बन्धित वडाका जनप्रतिनिधिहरुलाई भन्नुस, पैसा लाग्दैन । पैसा नभएकै कारण अस्पताल जानबाट बन्चित कसैलाई पनि गर्दैनौं तर सक्नेले तिरौं भन्ने हो ।
माथाढीमा कोरोना परीक्षणको दायरा कस्तो छ ?
हामीले कोरोना परीक्षणलाई महत्वका साथ हेरेका छौं । जव परीक्षण नै हुदैन तव कोरोना नियन्त्रण हुदैन भन्ने हाम्रो बुझाई छ । अहिलेसम्म हामीले ४ सय जती पीसीआर परीक्षण र १ सय जती एन्टिजेन परीक्षण गरेका छौं । अहिलेपनि हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीहरु वडावडामा परीक्षण गर्न जानुभएको छ । हामीले वार अनुसार विभिन्न वडाहरुमा परीक्षण गरेका छौं । लक्षण देखिएका तथा शंकास्पद सवैको परीक्षण गर्नुस भनेका छौं । अहिलेसम्म माथागढीमा २ सय ६६ जना संक्रमित हुनुभएको छ ।
हामीले होम आइसोलेसनलाई प्राथमिकताका साथ काम गरेका छौं । प्रत्येक वडाहरुमा सम्बन्धित वडाका वडा अध्यक्ष, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु, स्वास्थ्कर्मीहरु सहितको समिति बनाएका छौं । उक्त समिति होम आइसोलेसको अवलोकन गर्छ, लक्षण देखिए वा शंका लागे परीक्षण गर्ने, स्वाश फेर्न अप्ठेरो महसुुस भए तुरुन्त गाउपालिकाको कोरोना अस्पताल लैजाने, जटिल भए अन्य ठूला अस्पताल लाने गरिएको छ ।
होम आइसोलेसनमा बस्नेहरुलाई हामीले स्वास्थ्य तथा सुरक्षा किट तयार गरि वितरण गरेका छौं । भिटामिनहरु, औषधीहरु, थर्मोमिटर, माक्स, ग्लोव्स, सेनिटाइजर लगायतका सामाग्रीहरुको किट उपलब्ध गराएका छौं । जनप्रतिनिधि र स्वास्थकर्मीहरुले उहाँहरुको घरदैलो गरी अवस्था बुझिरहने गर्नुभाछ ।
अहिलेपनि हाम्रो सिङ्गो टिम दिनरात नभनी काम गरेका छौं । हामीले कोरोना अस्पताल संचालन गरी अक्सिजनको अभाव हुन दिएका छैनौं । पैसा नभएकै कारण कसैले पनि ज्यान गुमाउनु नपरोस भनेर हामीले अक्सिजन देखि एम्बुलेन्स र निशुल्क उपचार गरेका छौं । होम आइसोलेसनमा बस्नेहरुलाई उत्साह र हौसला प्रदान गर्दै स्वास्थ्य सुरक्षा किट व्यवस्था गरेका छौं । हाम्रा नागरिकहरु अरुको हल्लाको पछाडी नलाग्न र समस्या परे तुरुन्त जनप्रतिनिधि तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सम्पर्क गर्न समेत अनुरोध गर्दछु । हाम्रा जनप्रतिनिधि साथीहरु कर्मचारी सरह नै काम गर्नुभाछ, वडा वडामा पुग्ने विरामीको अवस्था बुझ्ने समस्या परे तुरुन्त रेस्क्यू गर्ने काम गरेका छौं । अहिलेसम्म त्यस्तो जटिलता आएको छैन । हामीसंग प्रप्याप्त अक्सिजन, स्वास्थ्यकर्मीहरु हुनुहुन्छ, । हाम्रो यो अभियानमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु, कर्मचारीहरु, विभिन्न संघसस्थाहरु, पत्रकार तथा देश तथा विदेशमा रहनुभएका आम नेपाली नागरिकहरुबाट सहयोग भएको छ, हामी सवैप्रति आभारी छौं ।